ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ၀မ်ပေါင်နှင့် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ အလိုမရှိကြောင်း လက်ပံတောင်းဒေသခံများ ဆက်လက် ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ၀မ်ပေါင်နှင့် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ အလိုမရှိကြောင်း လက်ပံတောင်းဒေသခံများ ဆက်လက် ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
KO Han Win Aung's Video
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 10:28 AM
အပြည်.အ၀ ထောက်ခံပါတယ် ။
sim ကဒ်တွေ ကျပ် ထောင်ဂဏန်း (ဂဏန်း ၄ လုံး)
နဲ. ရောင်းချပေးမယ်လို. ၀န်ကြီး တွေ၊ အာဏာပိုင်
တွေက အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ. တယ် ၊
...... ခု တော. ကျပ် နှစ်သောင်း နဲ. ဧပြီ ၅ ရက်နေ.ရောင်းမယ်တဲ. ။
ဦးသိန်းစိန်အစိုး ရ က ဘာပြော ပြော အတည်ပြုလို.
မရဘူး ၊ ပြောတဲ.အတိုင်း လုပ်ချင်မှလုပ်မယ်ဆိုတာပြနေတယ် ။
ပြီးတော. ခရိုနီတွေကို ကာကွယ်စောင်.ရှောက် ရမယ်ဆိုတာ လည်း လက်ကိုင်ထား တာအသေအချာပါ ။
(လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စ လိုပါဘဲ )